Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ (6157-87-5) hplc ma98% | AASraw SARMS
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ
Rating: SKU: 6157-87-5. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Trestolone Acetate (MENT) powder (6157-87-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ bụ ike steroid. Nakwa zoro aka dịka 7 alpha-methyl-19-nortestosterone (Mpo ntụ ntụ), ọ bụ steroid nke nwere ike ikwu na ọ dị oke ike n'ime ahụ, na-eme ka ike testosterone sikwuo ike. A na-ewere ya na ọ bara uru maka nzube nke ịmepụta ahụ na ike ọzụzụ.
Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ isi agwa
aha: Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ
Usoro Molecular: C21H30O3
Molekụla arọ: 330.465
Trestolone Acetate (MENT) uzuzu eji eme ihe na steroid
A na - akpọkarị Testolone Acetate powder (CAS 6157-87-5) dị ka ntụ ntụ.
Uche ntụ ọka (CAS 6157-87-5) Uji
N'iji ọgwụ kachasị elu nke 50 igwe kwa ụbọchị, ndị ọrụ nwere ike ịtụ anya inweta uru n'ime ọnwa atọ eji. O kwere omume iweliwanye ike na ogo ahụ na uru bara uru dị ka 20 pound na oge ahụ.
Ịdọ aka ná ntị na Trestolone Acetate ntụ ntụ
Jectdị injecting nke Trestolone Acetate powder (CAS 6157-87-5) ka a na-ewere dị ka usoro nnyefe kachasị mma maka steroid a anabolic mgbe ụdị dị iche iche ga-eweta nsonaazụ kachasị afọ ojuju. Ekwesiri ighota na onunu ogwu bu igodo. Onye ọ bụla nke na-eji Trestolone Acetate ntụ ntụ kwesịrị ịgbaso ntuziaka usoro ọgwụgwọ niile na leta iji gbochie mmetụta ọjọọ. Dosdị usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị ga-eweta nsonaazụ kachasị dị irè mgbe ejiri ya mee ogologo oge.
Maka ndị zuru oke imezu ahụ ha, ha ga-achọpụta ihe dịgasị iche iche iji nweta ihe mgbaru ọsọ ha. Ojiji nke Trestolone Acetate ntụ ntụ bụ otu ụzọ isi nweta ahụ dị mma, nke nwere nkwanye ùgwù kachasị uru. Ọ ga-ekwe omume ịrụpụta ezigbo ihe na-enweghị mmetụta ọjọọ, ihe ọzọ kpatara na ọtụtụ ga-anwale Trestolone Acetate ntụ ntụ na ndị ọzọ anabolic steroid.
Trestolone Acetate ntụ ntụ (CAS 6157-87-5)
Trestolone Acetate ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Trestolone Acetate ntụ ntụ; zụta ihe ntụ ntụ si AASraw